नेपाल लाइभ आइतबार, माघ १२, २०७६, १६:३७
काठमाडौं- नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध दुई थरी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।
हत्या आरोपमा अनुसन्धान र सभामुखका रुपमा काम गर्न रोक्न माग गर्दै परेका अलगअलग २ मुद्दा सर्वोच्चमा पेसीमा चढेका छन्।
आइतबार पेसीमा रहेको दोस्रो मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेसी गर्दै सोमबारका लागि सरेको छ।
न्यायाधीश हरिकुमार फुयाँलको इजलासमा रहेको मुद्दा उनले हेर्न नमिल्दा सरेको हो। न्यायाधीश फुयाँलले यसअघि सापकोटाको विपक्षमा बहस गरेकाले हेर्न नमिलेको हो।
२०६८ सालमा दायर भएको मुद्दामा फुयाँलले सापकोटाका विरुद्ध बहस गरेका थिए। तत्कालीन समयमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा सापकोटाविरुद्ध कनकमणि दीक्षित, सुशील प्याकुरेललगायतले सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा हालेका थिए। उक्त मुद्दा सुनुवाईका लागि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। संवैधानिक इजलासले फैसलाको चरणमा उनको मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको छ।
त्यस्तै, काभ्रेकी पूर्णीमाया लामाले पनि सापकोटाविरुद्ध मुद्दा हालेकी छन्। आफ्ना पति अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको संलग्नता भएको आरोपमा पूर्णीमायाले सोपाकोटाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। सो मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ।
आइतबार सभामुख निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर भएको निवेदन सुनुवाई हुन नसकेपछि सोमबारका लागि पुनः पेसीमा चढ्दै छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको निवेदनमा सोमबार पुनः अर्को इजलासमा पेशी चढेर सुनुवाई भएपछि यो विवादले निश्चित आकार लिनेछ।
पूरक निवेदनसहित सोमबार पेसी
शुक्रबार सापकोटाविरुद्ध त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गरेपनि आइतबार सुनुवाई हुन नसकेपछि उनी सभामुखमा चयन भए। सभामुख चयन भएपछि उक्त रिटको औचित्य कम भएपछि निवेदनले पुनः अर्को पूरक निवेदन दिने तयारी गरेका छन्। सभामुखको रुपमा सापकोटाको नाम प्रतिनिधि सभाले घोषणा गरेपछि त्यसलाई चुनौती दिँदै सोमबार नै दर्ता गरी सुनुवाई गरिने अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी दिए।
यसअघि सभामुखको निर्वाचन रोक्न माग गरिएको तर परिस्थितिले सभामुख चयन भइसकेका कारण सभामुखको रुपमा काम गर्न रोक्न माग गर्दै नयाँ पुरक निवेदन दर्ता हुने उनले बताए। यो मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेमात्र सापकोटा समस्यामा पर्ने छन्। अन्तरिम जारी गरेन भने उनी आफ्नो जिम्मेबारीमा अघि वढ्न सक्ने कानुनी बाटो खुल्ला हुने छ।
अर्जुन लामा हत्या प्रकरण २२ गते सुनुवाइ
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यही २२ गते सुनुवाई गर्दै छ। यसअघि पुस २५ गते रहेको मुद्दाको पेशी स्थगित हुदै सरेको थियो। माघ २२ को सुनुवाइ हुँदा उनी सभामुखको हैसियतमा हुनेछन्।
२०६८ देखि विचाराधीन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का प्रतिनिधिसभा सांसद तथा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सापकोटासहितका नेताविरुद्धको कर्तव्य ज्यानको आरोपको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको लामै समय बितिसकेको छ। वि. सं. २०६८ असार ६ गते सापकोटासहितका नेताविरुद्धको मुद्दाले सर्वोच्चमा प्रवेश पाएको हो। ८ वर्षभन्दा बढी समय बितिसके पनि यो मुद्दाको अन्तिम किनारा भने लाग्न सकेको छैन। तत्कालीन समयमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री थिए।
कर्तव्य ज्यान मुद्दाको आरोप लागेको व्यक्ति सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुन नसक्ने जिकिर गर्दै कनकमणि दीक्षितसहितले अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले २०७० असार १९ गते फाइल मगाउने आदेश दिएको थियो। उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णीमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते अर्को मुद्दा दायर गरिन्। काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा विचाराधीन किटानी जाहेरीमा अनुसन्धान नभएको भन्दै उनले त्यसका लागि आदेश हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। सापकोटासहित अन्यलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नु भन्ने माग उनले रिटमा गरेकी थिइन्।
सापकोटाविरुद्ध ३ थान रिट पुगेपछि २०७२ वैशाख ८ गते सर्वोच्चले काभ्रे प्रहरीमा रहेको जाहेरीमा भइरहेको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश गरेको थियो।
त्यसैगरी, २०७२ चैत २२ गते सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।
सापकोटा र पूर्वसहायक ऊर्जामन्त्री सूर्यमान दोङलगायतका नेताविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णीमाया लामा, कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलसमेत ८ जनाले दायर गरेको निवेदन अन्तिम किनारा हुने अवस्थामा रहेको छ।
पहिलो मुद्दामा सापकोटाले सफाई पाए पनि यो मुद्दामा पाएनन भने सभामुखको पदमा रहनका लागि नैतिक संकट उत्पन्न हुन सक्ने छ।
बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महरा जेल गएकाले ज्यान मारेको अभियोगमा पक्राउ गर्नुपर्ने आदेश सर्वोच्चबाट जारी भएमा सापकोटा समस्यामा पर्नेछन्। तर सर्वोच्चले खारेज गरे वा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पठाएमा भने सापकोटाले राहत पाउने छन्।